Iibso 50x200cm 19.7 "x78.7" High Gloss 5D Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kaarboon Fiber Vinyl Filim Hawada - Maraakiibta Bilaashka ah & Cashuurta La'aan WoopShop®
50x200cm 19.7 "x78.7" Farshaxan Sare 5D Gawaarida Gawaarida Kaararka Dareeraha Carbon Fiber Vinil Air
$ 21.40 qiimaha joogtada ah $ 30.58
Magaca Midabka Black
50x200cm 19.7 "x78.7" High Gloss 5D Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Kaarboon Fiber Vinyl Filim Hawada - Madow gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Magaca Brand: CARSUN
Meeleynta Xadhiga: Jirka oo dhan
Magaca Model: Kaarboon kaarboon LA-294
Width Item: 50
Nooca Saxeexa: Jidhka baabuurka
Dhererka Dhererka: 0.15
Length Item: 200
Sheyga Wadada: 0.15
Nooca Waxyaabaha: Kaarboon Fiber Vinyl
Cabbirka: 50 * 200cm
Heerka Isugeynta: 33 + Pascal
Heerkulka: -40 illaa + 80 digrii
Isku habboonaanta: goynta dhimista, qurxinta gaariga, qurxinta naqshadda dhismaha
Leh muuqaal & dareen la mid ah ama ka fiican kan xargaha gunta kaarboonka iyo midka adag
Waxaa lagu dabaqi karaa sagxadaha gudaha iyo bannaanka ee baabuurka (hoods, doomaha, muraayadaha indhaha iwm)
Si fudud ayaa loogu dabaqi karaa dhammaan rinjiyadaha baabuurta caadiga ah
Qiimo-dhac ayaa lagu nadiifin karaa saabuun iyo biyo.
Adigoon ku dhejinin hadhaaga gaariga kadib saarista
Nolosha adeegga ee sannadaha 3-5 ee banaanka, sannadihii 12 gudaha
Dacwadda xayeysiiska, ok tayada la tijaabiyey oo aan wali muuqan. gaarsiinta bilaashka ah.
Fasalka Filimka !! isbarbar dhig sawirrada, lakabka difaaca ee dusha sare ayaa la dabaqayaa! 3 toddobaadyo ayaa gaadhay Moscow
badeecadu waa sida lagu sharraxay ... rarku wuxuu ahaa mid deg deg ah oo yimid kahor taariikhda la qiyaasay. vinyl leh kanaalka sii deynta hawada.
Sida ka muuqata tayada sawirka badeecada laakiin codsi yar ayaa kari waayey. haddii aragtidaada ugu horreysa ay tahay mid guuleysatay oo keliya geeddi-socodka maraakiibta oo xoogaa dheer ahayd .. lagu soo qaatay 40 maalmood oo la gaadhay